ktmkhabar.com - एन्फामा चल्यो ‘कर्मा छिरिङ चेन्ज’ अभियान !
एन्फामा चल्यो ‘कर्मा छिरिङ चेन्ज’ अभियान !
काठमाडौँ – अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष हुन् कर्मा छिरिङ शेर्पा । २०७५ वैशाखमा भएको एन्फा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका शेर्पाले सोचेजस्ता काम नगरेपछि एन्फामा ‘कर्मा छिरिङ चेन्ज’ अभियान चलेको हो ।
४ बर्षअघि उनै शेर्पाले चेन्ज एन्फा अभियान चलाएका थिए । चेन्ज एन्फा अभियानका एक अभियान्त कर्मा छिरिङका विश्वास पात्र पंकजविक्रम नेम्वाङले ‘कर्मा छिरिङ चेन्ज’ अभियान चलाएका हुन् । शेर्पाले चार उपाध्यक्षमध्ये नेम्वाङलाई विश्वास गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
तर अहिले ठि उल्टो भएको छ । एन्फामा शेर्पापछि दोस्रो वरीयतामा रहेका नेम्बाङले पछिल्लो तीन वर्ष भने नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि लगातार प्रश्न उठाइरहे। एन्फाको केन्द्रीय सदस्य बनेको २० वर्षपछि अहिले नेम्बाङ अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन्।
सोमबार हुने एन्फाको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा शेर्पाका विरुद्ध नेम्बाङले अध्यक्ष पदका उम्मेदवारी दिएका छन् । झापा धुलाबारीका नेम्बाङको बाल्यकाल फुटबलमय थियो । उनका बुबाका पाँच दाजुभाइ नै फुटबल खेल्थे। २०२८ सालमा स्थापित रोलिङ क्लबमा नेम्बाङ परिवारको ठूलो योगदान छ। क्लबले पञ्चायत कालमा प्रतियोगिता आयोजना गरेर जिल्लालाई फुटबलमय बनाउँथ्यो।
छोरा पुस्तामा पनि फुटबलको क्रेज सर्‍यो। भाइ आकाशविक्रम नेम्बाङले राष्ट्रिय टिमबाट समेत खेलेको पंकज बताउँछन्। उनका दाइहरू पनि क्लबस्तरका खेलाडी थिए।
उनी एन्फामा प्रवेश गर्दा नेपाली फुटबल विभाजित थियो। उनी सदस्य रहेको एन्फाका अध्यक्ष गणेश थापा थिए भने अर्कातिर गीता राणाको अध्यक्षमा अर्को फुटबल संघ थियो। सो संघमा भने हालका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा थिए। शेर्पाले कार्यवहाक अध्यक्ष समेत चलाए।
पछि विवाद मिलेपछि शेर्पा पनि गणेश थापाको नेतृत्वको एन्फामा सहभागी भए। २०७१ सालपछि शेर्पा र नेम्बाङ थापाविरूद्ध एकजुट भएका थिए। थापाले एन्फाभित्र अनियमितता भएको भन्दै आवाज उठाउँदा शेर्पा र नेम्बाङसहितका व्यक्तिले देशव्यापी आन्दोलन चलाएका थिए।
नेम्बाङ पक्षले एन्फा मुख्यालयको रिनोभेसन गर्दा नियम विपरित काम गरेको, २०७५ लिगमा रामसरस्वती मिडियालाई बिनाटेन्डर मिडिया अधिकार दिएको लगायतका अनियमितताको आरोप लगाउँदै आएको छ।
‘एन्फामा नियम मिचेर आर्थिक काम गरेका अरू धेरै उदाहरण छन्। यसका विरुद्धमा बैठकमा आवाज उठायौं। नोट अफ डिसेन्ट लेख्यौं,’ नेम्बाङले भने। एन्फा शुद्धिकरण अभियानमा उठाइएका नारालाई ‘नारामै’ सीमित गरेको नेम्बाङको भनाइ छ।
‘राम्रा–राम्रा नारालाई नारामात्र सीमित गर्नुभयो। सबैको भावनाअनुसार काम गर्नुभएन। अधिकार केन्द्रीकृत गर्नुभयो। १४ वटा टेक्निकल सेन्टर बनाउछु भनेकोमा एउटै ट्रेनिङ सेन्टर बनेन,’ नेम्बाङले आफूले उम्मेदवारी दिनु पर्नेको कारण खुलाउँदै अघि भने, ‘अध्यक्षज्यूले हिजो जुन–जुन काम गर्छु भनेर चुनाव जित्नु भयो त्यो गर्नुभएन। हामी त्यो काम पूरा गर्न हामीले उम्मेदवारी दिएका हौं।’
उनले आफू एन्फा अध्यक्षमा निर्वाचित भएमा एन्फा सचिवालयलाई चुस्त बनाउने बताए। अधिकार बाडेर विभिन्न समितिलाई सक्रिय बनाउने, बजेटको समानुपातिक विनियोजन गर्ने, ग्रासरुट फुटबललाई वडासम्म पुर्‍याउने, महिला र पुरुषको गरी ५० वटा फुटबल एकेडेमी स्थापना गर्ने, लिगलाई व्यवस्थित लामो बनाउने, क्लबको तयारी खर्च बृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय लिग आयोजना गर्ने, चार वर्षभित्रमा महिला र पुरुषको साफ च्याम्पियनसिप जित्ने लगायतको एजेन्डा अघि सारेका छन्।